Badhanka Shiinaha Alxanka xiriiriya soo saaraha iyo alaab-qeybiye | ZHJ
Dabeecaddiisa sida soo socota:
1, Xiriirka Tri-birta wuxuu leeyahay dusha xiriir sida walxaha Fe, oo leh jajabyo yar yar si loo kordhiyo alxanka. Waxay ka caawineysaa xasiloonida alxanka xiriirka warqad biraha biraha ah iyo qalabka salka xaashida birta ah iwm.
2, Mawqifka alxanka wuxuu kuxiran yahay dhalaalida biraha. Xasiloonida korontada ayaa aad ugafiican laxirirka xiriirinta muuqaalkeeda iyo mowqifkeeda, Haddiise uu riveting, wuxuu badiyaa qalloociyaa biraha biraha sidoo kale lumiya alxanka .Mar dambe waxay saameyn ku yeelataa mitirka heerkulka iyadoo leexsan xogta.
3, Marka la barbardhigo Welding Contact, waxay leedahay waqti kuleyl gaaban iyo jawi nadiif ah .Waxaa loo heli karaa qayb yar oo soosaara, gaar ahaan nidaamka mini.
Xiriiriyaha Tri-metal wuxuu dooran karaa bir kala duwan oo qalin lacag ah oo lacag koronto oo kala duwan ah qalab .Waxaa loo heli karaa xiriirka buundada xiriirinta alxanka garaaca wadnaha .Waxaa loo isticmaalaa si ballaaran qaybaha xiriirka sameynta iyo buundada biraha, sida gudbinta, mini –switch, xakamaynta kuleylka, badhanka iyo bareeraha wareega.
Khadka wax soo saarka ee Tri-metal xiriiriya wuxuu iskuxiraa automaton, mashiinka waxsoosaarka, mashiinka alxanka, shaambada otomaatiga ah, mashiinka xirida xaashida, tijaabiyaha cadaadiska Haydarooliga, borojektar, mikroskoob iwm. Mashiinka 100tesing .Wuxuu kadhigi karaa sheyga xiriirka macaamiisha iyadoo la adeegsanayo wax soo saar sanadle ah 2 bilyan oo gogo ' karti
1. Mararilada waaweyn:
AgSnO2, AgSnO2InO3, AgZnO2, AgCu0, AgCd0, iwm.
Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay noocyada kala duwan ee qalabka wax lagu kala xiriiro, gudbinta, wareejiyayaasha wareegga iyo furayaasha, iwm. 3.Sharaxaadda alaabta: Tiro yar oo nikle ah ayaa la galiyaa agabka Ag si looga dhigo miraha Ag-ka mid wanaagsan, si loo wanaajiyo xoogga, adkaanta, caabbinta alxanka iyo xirashada caabbinta agabka Ag. Dhanka kale, maaddadu waxay haysaa faa'iidooyinka ku-xirnaanta sare iyo iska caabbinta xiriirka hoose ee Ag saafi ah. Rivet adag waa nooca xiriirka oo gebi ahaanba ka samaysan waxyaabo xiriir la leh-badanaa aalado qalin ama lacag ah.
Hore: Golaha alxanka
Xiga: Tilmaamaha Xiriirka Korantada
Silig Birta Daawaha Birta